Iziteshi Ezidlala Kuyi-Internet | I-TV.JW.ORG | Indlela Yokuyisebenzisa
Ongakwenza Kuyi-JW Broadcasting
Bukela Ezidlala Ngokuqhubekayo Kuyi-TV.JW.ORG
Bukela Ama-video Athandwayo Kuyi-TV.JW.ORG
Lalela Izinto Ezilalelwayo Kuyi-TV.JW.ORG
Indlela Yokushintsha Indlela Izinto Ezime Ngayo Kuyi-Computer, I-Tablet Noma Kumakhalekhukhwini Wohlobo Lwe-Smartphone
Imibuzo Evame Ukubuzwa​—I-JW Broadcasting (Iwebusayithi)
Isiteshi Sokusakaza Nge-Roku Se-JW
Faka Uhlelo Lwe-Computer LweSiteshi Sokusakaza Nge-Roku Se-JW
Bukela Ama-Video Adlalayo Nge-Roku
Isiteshi Sokusakaza Nge-Roku Se-JW: Bukela Ama-Video Athandwayo Nge-Roku
Lalela Izinto Ezilalelwayo Nge-Roku
Imibuzo Evame Ukubuzwa​—I-JW Broadcasting (Roku)
Imibuzo Evame Ukubuzwa​—I-JW Broadcasting (Apple TV)
Imibuzo Evame Ukubuzwa​—I-JW Broadcasting (Fire TV)
Ingxenye ethi Ezidlalayo ye-tv.jw.org iyefana nethelevishini ngenxa yokuthi ineziteshi ezinezinhlelo eziningana. Khetha isiteshi ukuze ubukele okusakazwayo. Uma ufuna ukuyilawula wena i-video (okuwukuthi, ukuyibuka kusukela ekuqaleni futhi ukwazi ukuyimisa kancane, ubuyele emuva noma uye phambili), yiya engxenyeni ethi Ama-video Athandwayo.
Landela lezi zinyathelo ukuze ubukele okudlalayo:
Bukela Isiteshi Esidlala Ngokuqhubekayo Kuyi-computer
Bukela Isiteshi Esidlala Ngokuqhubekayo Emshinini Wobuchwepheshe Ophathwayo
Khetha Isiteshi Esihlukile Kuyi-computer noma kuyi-Tablet
Khetha Isiteshi Esihlukile Kuyi-Smartphone
Funda Uhlu Lokuqukethwe Yiziteshi
Chofoza ingxenye ethi Ezidlalayo. Isiteshi esihlale sikhona sizongena, bese kudlala i-video yangaleso sikhathi.
Ukuze i-video edlalayo igcwale i-screen se-computer yakho, yisa i-mouse endaweni yokuyigcwalisa bese uchofoza.
Uma ungasafuni ukuba igcwale i-screen, chofoza inkinobho ethi Esc noma uyise i-mouse endaweni efanele bese uchofoza ukuze ivele ngendlela evamile.
Ukuze ushintshe indlela i-video ecace ngayo, yisa i-mouse yakho engxenyeni okwenziwa kuyo lolo shintsho. Chofoza inombolo ofuna i-video idlale ngayo. (Phawula: Akuyona yonke imishini ekwazi ukwenza lokhu.)
Phawula: Inombolo enkulu isho ukuthi i-video izodlala ngokucace kakhudlwana, okudinga ukuba i-Internet yakho ibe nesivinini esikhulu. Khetha inombolo ezovumelana kahle nesivinini se-Internet yakho nobukhulu be-screen sakho. (Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe, bheka ingxenye ethi Shintsha Indlela Okudlala Ngayo I-computer Noma Umshini Wakho Wobuchwepheshe.)
Ukuze wenyuse noma wehlise i-volume, yisa i-mouse yakho engxenyeni yokushintsha i-volume. Yehlisa noma ukhuphule ophawini olufanele.
Chofoza ingxenye ethi Iqale Ekuqaleni ukuze uphume esiteshini esidlalayo futhi ubukele leyo video esuke idlala engxenyeni ethi Ama-video Athandwayo.
Icebiso: Yiya engxenyeni yokwenza ushintsho ukuze ukhethe ukuthi yisiphi isiteshi ofuna sidlale kuqala kuyi-computer yakho uma uchofoza ingxenye ethi Ezidlalayo.
Uma usibukela isikhathi eside isiteshi esidlala ngokuqhubekayo, kuzovela umyalezo okubuza ukuthi usabukele yini. Isizathu salokho ukuthi kubiza imali eningi ukubukela i-video edlala esiteshini sokusakaza, ngakho asithandi ukusakaza uhlelo kube kungekho muntu obukele. Uma kuwukuthi usabukele, chofoza u-OK ukuze uqhubeke uyibukele.
Phawula: Kunomehluko endleleni imishini yobuchwepheshe ephathwayo esebenza ngayo njengoba inama-screen angalingani kanti nendlela esebenza ngayo ayifani. Ezinye zalezi zindlela ziboniswe eziqondisweni ezingezansi.
Emshinini othe ukuba mkhudlwana, njenge-tablet, chofoza ingxenye ethi Ezidlalayo. Kuyobe sekungena isiteshi esihlelwe kusengaphambili.
Kumakhalekhukhwini wohlobo lwe-smartphone, chofoza u-Menu. Yibe usuchofoza ingxenye ethi Ezidlalayo ukuze kungene isiteshi esihlelwe kusengaphambili noma ucindezele umcibisholo okhombe ezansi ngakwesokudla sengxenye ethi Ezidlalayo bese ukhetha isiteshi osifunayo.
Chofoza uphawu lokudlala i-video ukuze uqale ukuyidlala.
Ukuze i-video yakho igcwale i-screen, chofoza i-mouse yakho kabili noma uchofoze kuyo i-video, bese uchofoza endaweni efanele yokugcwalisa i-screen.
Phawula: Uma udlala i-video uyigcwalise i-screen, izinto zokuyilawula (u-pause, u-play, u-fast forward, u-rewind) zingase zivele kodwa ngeke zisebenze.
Kuyi-iOS: Ukuze i-video oyidlalayo ingabe isagcwala i-screen, chofoza kuyo, bese uchofoza ingxenye yokuyinciphisa noma inkinobho ethi Done.
Kuyi-Android: Ukuze i-video oyidlalayo ingabe isagcwala i-screen, chofoza kuyo, bese ucindezela inkinobho ethi Back.
Kuyi-Windows Mobile: Ukuze i-video oyidlalayo ingabe isagcwala i-screen cindezela inkinobho ethi Back emshinini wakho wobuchwepheshe.
Ukuze ushintshe indlela i-video ecace ngayo, chofoza kuyo i-video bese uchofoza endaweni efanele. Yibe usukhetha izinga ofuna icace ngalo. (Phawula: Akuyona yonke imishini yobuchwepheshe ekwazi ukwenza lokhu.)
Phawula: Inombolo enkulu imelela ukudlala kahle kakhulu kwe-video, okudinga ukuba i-Internet yakho ibe nesivinini esikhulu. Khetha inombolo ezovumelana kahle nesivinini se-Internet yakho nobukhulu be-screen sakho. (Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe, bheka ingxenye ethi Shintsha Indlela Okudlala Ngayo I-computer Noma Umshini Wakho Wobuchwepheshe.)
Ukuze ubone ukuthi yini ezolandela, chofoza Uhlu Lwezinhlelo Zeziteshi. Emshinini omncane, vele wehle uye ezansi.
Chofoza ingxenye ethi Iqale Ekuqaleni ukuze uphume esiteshini futhi ubone i-video esuke idlala engxenyeni ethi Ama-video Athandwayo.
Icebiso: Yiya endaweni yokushintsha ukuze ukhethe isiteshi ofuna sidlale kuqala emshinini wakho wobuchwepheshe lapho uchofoza ingxenye ethi Ezidlalayo.
Ukushintsha Isiteshi Kuyi-computer Noma Kuyi-tablet
Uma i-video idlala ngendlela evamile (ingagcwele i-screen), uhlu lwezinye iziteshi luyavela ngaphansi kwe-video. Chofoza isihloko sesiteshi ofuna ukusibukela.
Kuyi-computer noma kuyi-tablet, iziteshi ziboniswe mangezansi ne-screen. Isiteshi esisuke sidlala ngaleso sikhathi siphawulwe ngombala oluhlaza ngaphezu kwesihloko sesiteshi.
Chofoza uMcibisholo Ongakwesobunxele noma uMcibisholo Ongakwesokudla uma ufuna ukubona ezinye iziteshi. Chofoza isihloko sesiteshi ofuna ukushintshela kuso.
Kuyi-computer, i-video esuke idlala esiteshini osikhethile ivele idlale ngaso leso sikhathi. Emishinini ye-iOS neye-Android, kudingeka uchofoze uphawu lokudlala i-video ukuze uqale ukuyidlala.
Ukushintsha Isiteshi Kumakhalekhukhwini Wohlobo Lwe-Smartphone
Njengoba ama-video evela eyizithombe emshinini omncane ophathwayo, njenge-smartphone, iziteshi ezidlalayo zizovela zivundlile ngezansi kwe-video. Isiteshi esisuke sidlala ngaleso sikhathi siphawulwe ngombala oluhlaza ngenhla kwesihloko se-video. Chofoza uMcibisholo Okhombe Ezansi ngakwesokudla segama lesiteshi ukuze ubone ukuthi yini esuke idlala ngaleso sikhathi. Yiya ezansi uma ufuna ukubona izinhlelo ezilandelayo, ukuthi zidlala isikhathi eside kangakanani nokuthi zidlala nini.
Chofoza uMcibisholo Okhombe Phezulu uma ufuna ukuvala uhlu lwezinhlelo zaleso siteshi.
Chofoza isihloko sesiteshi ofuna ukusikhetha, bese uchofoza uphawu lokudlala i-video ukuze kuqale i-video esuke idlala ngaleso sikhathi.
Bheka Uhlu Lwezinhlelo Zeziteshi
Kuyi-computer noma kuyi-tablet, Uhlu Lwezinhlelo Zeziteshi lutholakala uma i-video idlala ngendlela evamile (ingagcwele i-screen). Uma usebenzisa umshini omncane, njenge-smartphone, bheka isihloko esithi Ukushintsha Isiteshi Kumakhalekhukhwini Wohlobo Lwe-Smartphone.
Chofoza Uhlu Lwezinhlelo Zeziteshi ukuze ubone uhlu lwazo zonke iziteshi ezitholakalayo kanye nezinhlelo ezisazolandela esiteshini ngasinye.
Uhlu ngalunye luqukethe izinhlelo zesiteshi esisodwa. I-video esuke idlala ngaleso sikhathi iboniswe phezulu ohlwini. Izinhlelo ezizolandela, kuhlanganise nobude bazo nokuthi zizoqala ngasikhathi sini, ziba ngezansi ohlwini.
Chofoza Umcibisholo Ongakwesobunxele noma Ongakwesokudla ukuze ubone ezinye iziteshi. Khetha isiteshi osifunayo ukuze uhlu lwezinhlelo zeziteshi lunyamalale.
Phawula: Izikhathi eziboniswe oHlwini Lwezinhlelo Zeziteshi zibhalwe ngokuvumelana nesikhathi salapho uhlala khona (okuwukuthi isikhathi esikuyi-computer yakho noma emshinini wobuchwepheshe owusebenzisayo). Lokhu kusho ukuthi akuwona wonke umuntu oyobukela i-video efanayo ngesikhathi esifanayo. Ngokwesibonelo, uma ubukela i-video ngo-7:00 ntambama, umuntu obukele isiteshi esifanayo osezweni elingasempumalanga uyobe esenehora eyibukile leyo video, njengoba isikhathi endaweni yakubo siphambili ngehora. Umuntu obukele i-video osezweni elingasentshonalanga uyoyibona ngemva kwehora wena uyibukile, njengoba isikhathi endaweni yakubo sisemuva ngehora.
Phinde uchofoze Uhlu Lwezinhlelo Zeziteshi ukuze uphume kulo futhi ubuyele kuyi-video.
Bukela ISiteshi Sokusakaza Se-JW Engosini